Ogaden News Agency (ONA) – Mucaaradka Itobiya oo ku eedeeyay xukuumadda xadgudub xad-dhaaf ah
Mucaaradka Itobiya oo ku eedeeyay xukuumadda xadgudub xad-dhaaf ah
Posted by ONA Admin	/ November 2, 2013
Xisbiga mucaaradka ee UDJ ayaa ku eedeeyay xukuumadda Itobiya inay afduubeen oo si sharcidarra ah u xidheen una qaraaceen 150 ka mid ah xubnaha xisbiga.
Warbixintan oo shabakadda Aljazeera ay soo qortay (Halkan Riix) ayuu xisbiga UDJ ku soo bandhigay qoraal ka kooban 39 safxadood oo si tafatiran u qoran dhibaatada iyo xadgudubka loo gaystay xubnihii xisbiga.
Wuxuu sheegay xisbiga UDJ in 150 ka mid ahaa xubnaha xisbiga United Dimocratic and Justice UDJ si xad dhaaf ah oo loo qaraacay si xaqdarra ah oon sharciga waafaqanayna ay ugu xidhan yihiin booliska iyo saraakiisha sirdoonka Itobiya. Sidaa waxaa u sheegay saxaafadda Negasso Gidada oo ah gudoomiyaha xisbiga.
Wuxuu intaa raaciyay; “Waxaan ka codsanaynaa xukuumadda inay joojiso xad-gudubka xuquuqda aadanaha oo kuwa ka masuulka ah cadaaladda la horkeeno.” Negasso wuxuu ahaa M/weynaha Itobiya mudadii 1995 – 2001.
Shabakadda Al-Jazeera waxay sheegtay inuu diiday afhayeenka xukuumadda inuu ka jawaabo arintaa.
Itobiya waa dawlad aan dhaqan u lahayn dimoqraadiyadda iyo in cadaalad lagu dhaqo shacabka, waxaana xukunka lagu qabsadaa qoriga caaradiisa. Markuu riday Mingisto Xayle Mryaam xukunkii Boqortooyada ee boqolaalka sano soo taxnaa, wuxuu ku badalay nidaam Hantiwadaag Marxism ah isagoo ku sheegay inay shaqaalaha iyo beeralayda dalka xukumaan. Wuxuu xukunka haystay 1974 – 1991, oo dagaal lagu hoobtay looga aryay dalka. Ka dib waxaan qabsaday dagaalyahankii TPLF oo adeegsanaya waxay ku magacaabeen isbahaysiga EPRDF oo ka kooban 4xisbi oo matalaya qawmiyadaha ay ka soo jeedaan oo ah Tigree, Amxaaro, Oromo iyo Qawmiyadaha Koonfureed. Laga bilaabo 1991 waxaa xukunka dalkaasi gacan bir ah ku haya TPLF. Doorashadii dhacday 2005tii markay muuqatay inuu ku guulaysanayo doorashada xisbigii mucaaradka ee CUD ayay xukuumadii TPLF joojisay doorashadii, dadkii ka soo horjeedsaday arintaa ee banaabaxyada ka dhigay Adisaabab waxaa laayay ciidankii oo madaxa ka wada toogtay. Maalintaa ayuu ku dhawaaqay Kaligii-Taliyihii madaxda u ahaa TPLF Meles Zanawi inuu dalka ku qabsanay qoriga uuna kaga tagayo xukunka qori caaradii. Mana muuqato in TPLF iyo xukuumadda ka talisa dalka Itobiya ay diyaar u yihiin wax aan ahayn xabadda iyo cadaadis inay dalka Itobiya ku xukumaan.